Word मा छविबाट पृष्ठभूमि कसरी छिटो र सजिलै हटाउने | अनलाइन क्रिएटिभहरू
शब्द सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने वर्ड प्रोसेसरहरू मध्ये एक हो। यसको प्रसिद्धिको अंश ह्यान्डलिङको सन्दर्भमा यसको सरलतालाई श्रेय दिन सकिन्छ, तर यसले प्रदान गर्ने उपकरण र कार्यहरूको ठूलो संख्यामा पनि। यो एक धेरै पूर्ण कार्यक्रम हो र प्रयोगकर्तालाई पाठमा अतिरिक्त सामग्री थप्न अनुमति दिन्छ, यसको बुझाइलाई सहज बनाउँदै, उदाहरणका लागि, ग्राफिक्सको प्रयोग वा प्रयोग गरेर। रेखाचित्र उपकरणहरू, र यसलाई थप आकर्षक बनाउन।
यस पोष्टमा म तपाईंलाई "पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्" उपकरण प्रयोग गरेर Word मा छविको पृष्ठभूमि कसरी हटाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु।। प्रक्रिया सुपर सरल र धेरै छ पृष्ठभूमि बिना तस्बिरहरु संग कागजातहरु लेआउट को लागी उपयोगी वा आफैले सिर्जना गरेको कोषको साथ। यो पोस्ट पढ्न जारी राख्नुहोस् र यसलाई3सजिलो चरणहरूमा प्राप्त गर्नुहोस्।
1 छवि खोल्नुहोस् र यसलाई सार्न सक्षम हुन सेट गर्नुहोस्
2 पृष्ठभूमि हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
3 Word को स्वचालित चयन सफा गर्नुहोस्
4 नयाँ पृष्ठभूमिहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
छवि खोल्नुहोस् र यसलाई सार्न सक्षम हुन सेट गर्नुहोस्
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो Word मा छवि खोल्नुहोस् जुन हामी पृष्ठभूमि हटाउन जाँदैछौं। हामी सक्छौ सीधा तान्नुहोस् पृष्ठमा चित्र वा हामी सक्छौं घुसाउनुहोस् > छवि > फाइलबाट छवि क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो कम्प्युटरमा खोज्नुहोस्।
अब हामी जाँदै छौं फिट-टु-टेक्स्ट मोड परिवर्तन गर्नुहोस् यसलाई स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्षम हुन। यदि तपाइँ छविमा डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सिधै जानुहुन्छ "छवि ढाँचा", दिनुहोस् पाठ समायोजन गर्नुहोस् र तपाइँ यी दुई विकल्पहरू मध्ये कुनै एक रोज्न सक्नुहुन्छ: "पाठको पछाडि" वा "पाठको अगाडि"।
पृष्ठभूमि हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
ध्यान दिनुहोस् किनकि अब ट्यूटोरियलको महत्त्वपूर्ण भाग सुरु हुन्छ! यदि तपाइँ शीर्ष बायाँमा हेर्नुहुन्छ (छवि ढाँचा प्यानलमा) तपाइँसँग एउटा बटन छ जुन भन्छ "पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्"। लागू गरौं।
तपाईले देख्नुहुनेछ, अब छविको भागलाई गुलाबी तहले ढाकिएको छ, त्यो गुलाबी क्षेत्र हो जुन कार्यक्रमले स्वचालित रूपमा "पृष्ठभूमि" लाई विचार गर्दछ र, त्यसैले, यो हटाउनेछ। तर तैपनि, कहिलेकाहीँ शब्दले "पृष्ठभूमि" के हो र के होइन भनेर पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सक्दैन, प्राय: पृष्ठभूमिका केही भागहरू त्यस क्षेत्रमा लुक्न्छन् जुन हामीले छविको राख्न जाँदैछौं र यसको विपरीत। कुनै समस्या छैन, यसलाई समाधान गर्न धेरै सरल छ.
Word को स्वचालित चयन सफा गर्नुहोस्
शीर्षमा, तपाईंसँग दुईवटा प्रतीकहरू छन्: एक प्लस र एक माइनस। यी प्रतीकहरू हुन् जसले हामीलाई शब्दको स्वचालित चयनलाई सच्याउन मद्दत गर्नेछ।
"+" ले तपाइँलाई हामीले बचत गर्न चाहेको क्षेत्रहरू पुन: प्राप्ति गर्न अनुमति दिनेछ छविको र त्यो गल्तीले त्यो गुलाबी क्षेत्रमा चिप्लिएको छ।
"-"ठ्याक्कै उल्टो गर्छ, गुलाबी क्षेत्रमा ती क्षेत्रहरू समावेश गर्न अनुमति दिन्छ जुन पृष्ठभूमिको अंश हो र त्यो कार्यक्रम पत्ता लागेको छैन।
दुबै एक प्रकारको ब्रशको रूपमा काम गर्छन्। तपाईंले ठूलो विस्तारमा सच्याउन चाहनुभएको क्षेत्रलाई रंग्न आवश्यक छैन, केवल सानो टच दिँदा पर्याप्त हुनेछ। किनारहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस् किनभने त्यहाँ सामान्यतया धेरै त्रुटिहरू छन्, यसलाई शान्तपूर्वक गर्नुहोस्, किनकि त्यस प्रकारको असफलताले तपाइँको पृष्ठभूमि परिवर्तनलाई बर्बाद गर्न सक्छ। जब तपाईं परिणाम संग खुसी हुनुहुन्छ परिवर्तनहरू राख्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्.
नयाँ पृष्ठभूमिहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
यदि तपाईंले यो टाढा बनाउनुभएको छ भने, तपाईंले छविबाट पृष्ठभूमि हटाउन पहिले नै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ! अब, आफ्नो कल्पना र मुक्त लगाम दिनुहोस् नयाँ कोषहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। रोचक रचनाहरू प्राप्त गर्न एक राम्रो विचार हो आकारहरू घुसाउनुहोस् र आकार र रंगहरूसँग खेल्नुहोस्.
आकारहरू सम्मिलित गर्दा, तिनीहरूलाई छविको अगाडि दौडनबाट रोक्न, तिनीहरूलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् फारम ढाँचा > व्यवस्थित गर्नुहोस् > फिर्ता पठाउनुहोस् > फिर्ता पठाउनुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी छिटो र सजिलै Word मा छवि देखि पृष्ठभूमि हटाउने